China Large Size Heavy Duty Steel Parts Welding Fabrication Parts ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ရောင်းချသူများ |သီဟ
အရွယ်အစားကြီးသော အကြီးစား သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်း အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူ
ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ကြိုက် သံမဏိ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖန်တီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများမှာ မီးတောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လေဆာဖြတ်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Tube Bending၊ Welding နှင့် Powder coating သို့မဟုတ် Hot Dip Galvanized finishing ပါဝင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သံမဏိ၊ သံမဏိနှင့် အလူမီနီယမ်သတ္တုများကို အထူးပြုပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများကို သံမဏိကြီး သို့မဟုတ် အသေးစားဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်သော ဂဟေအရည်အသွေး၊ တင်းကျပ်သော ပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် အမြန်ထုတ်လုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ထုတ်ကုန်အမည် ကြီးမားသော Dimension အကြီးစား သံမဏိ အစိတ်အပိုင်းများကို ဂဟေဆော်ခြင်း တပ်ဆင်ခြင်း စိတ်ကြိုက် သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း။
ပစ္စည်း သံမဏိ / အပျော့စားသံမဏိ / သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ / အလူမီနီယမ် / တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များ။
ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ် CNC လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း > သတ္တုကွေးခြင်း > ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် အရောင်တင်ခြင်း > မျက်နှာပြင် ပြုပြင်ခြင်း > အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်း
လျှောက်လွှာစက် စက်ယန္တရား၊ အာကာသယာဉ်၊ မော်တော်ကား၊ သတ္တုဗေဒ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး၊ စွမ်းအင်သစ်၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး၊ ရေနံဓာတု၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊
ထုပ်ပိုးခြင်း။ စံချိန်မီ ပင်လယ်ရေနှင့် ကိုက်ညီသော ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဖောက်သည်၏ တောင်းဆိုချက်အရ
ကုန်သွယ်မှုစည်းမျဥ်းများ EXW၊ FOB၊ CIF၊ C&F စသဖြင့်
ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ TT၊ L/C၊ Western Union၊ Paypal
အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ/ အထူးအင်္ဂါရပ်များ-
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သုံးစွဲသူများအတွက် စိတ်ကြိုက်သတ္တုထုတ်လုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်နှင့် ကြေးနီသတ္တုစပ်များကဲ့သို့သော ပုံမှန်သတ္တုများနှင့်သာမက နီကယ်နှင့် တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များကဲ့သို့သော ရှားပါးသတ္တုများနှင့်လည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။စက်ယန္တရား၊ အာကာသယာဉ်၊ မော်တော်ယာဥ်၊ သတ္တုဗေဒ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး၊ စွမ်းအင်သစ်၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး၊ ရေနံဓာတုနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသော နယ်ပယ်များဖြစ်သည်။သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို ဖွင့်ထားပြီး အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများတွင် အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။
ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်နှင့် ကြေးနီသတ္တုစပ်ကဲ့သို့သော သတ္တုများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအမျိုးအစားထဲသို့ ကျရောက်သော်လည်း နီကယ်နှင့် တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်ကဲ့သို့သော ရှားပါးသတ္တုများနှင့်လည်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း- အကြီးဆုံးအရွယ်အစား 2700X3500၊ အများဆုံးအထူ 25mm
ပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်း- အကြီးဆုံးအရွယ်အစား 2500X3200၊ အမြင့်ဆုံးအထူ 70mm
မီးတိုင်ဖြတ်တောက်ခြင်း- အကြီးဆုံးအရွယ်အစား 18000X5000၊ အများဆုံးအထူ 300mm
ဖိဘရိတ်- အမြင့်ဆုံးအရှည် 15000mm၊ အမြင့်ဆုံးအထူ 100mm
ပန်းကန်ပြားလိပ်ခြင်း- အများဆုံးအကျယ် 4100mm၊ အမြင့်ဆုံးအထူ 200mm
စက်ကိရိယာ- အကြီးဆုံးအရွယ်အစား 46000X8000X7000
1) Sheet metal တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
2) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် အလုပ်ကြိုးစားသော ဝန်ထမ်း 80 ကျော်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို လိုက်စားသည်။
3) နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စက်ကိရိယာများဖြစ်သည့် CNC၊ ဂဏန်းလေစက်များ၊ ဂဟေဆက်ကိရိယာများ၊
CMM သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည့် ထောက်လှမ်းစမ်းသပ်ကိရိယာများ။
4) OEM ဝန်ဆောင်မှု၊ သင်တောင်းဆိုမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်လိုက်ဖြစ်သည်။
5) ISO အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
1. သင်က စက်ရုံလား။
2. မင်းဘာတွေ ကောင်းကောင်း ?
ပုံမှန်မဟုတ်သော အော်ဒါများ (မျက်နှာပြင် ကုသခြင်း အမျိုးမျိုးဖြင့် စာရွက်သတ္တု အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ခြင်း) နှင့် သံမဏိ / အလူမီနီယမ် / တိုက်တေနီယမ် သတ္တုစပ်ပစ္စည်းများကို ကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်စာရွက်သတ္တုနှင့် လေးလံသောသတ္တုလက်ရာများ၊ သင်ဒီဇိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်သည်၊ သင်၏ပုံဆွဲခြင်း/နမူနာ/ပုံများကို အလွန်တန်ဖိုးထားပါမည်။
နမူနာကို ကမ်းလှမ်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းသာပါသည်။
အများအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အော်ဒါတင်ပြီးမှသာ ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြုလုပ်ကြသည်။မှာယူမှုအများစုကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
တင်းကျပ်သောကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှု၊ ကုန်ကြမ်းတိုက်ရိုက်။ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်စာရွက်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ပစ္စည်း၊ အတိုင်းအတာ၊ မျက်နှာပြင် ကုသမှု၊ ပေးပို့ခြင်းနှင့် စသည်တို့အပေါ် စျေးနှုန်းကွဲပြားပါသည်။နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းသည် လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ယခင်- စိတ်ကြိုက် Stainless Steel Bending, Welding Fabrication Products
နောက်တစ်ခု: China Fabrication Factory မှ စိတ်ကြိုက် ဂဟေဆော်ခြင်း နှင့် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ
စိတ်ကြိုက် Metal Fabrication
စိတ်ကြိုက်သတ္တု Fabrication စက်ရုံ
စိတ်ကြိုက် Sheet Metal Fabrication
Fabrication Parts စက်ရုံ
Heavy Duty Steel အစိတ်အပိုင်းများ
Heavy Duty Welding Fabrication Parts
Stainless Steel စိတ်ကြိုက် Metal Fabrication
Welding Fabrication Parts ထုတ်လုပ်သူ
Welding Fabrication Parts ပေးသွင်းသူ
ကုမ္ပဏီအကောင့်မန်နေဂျာသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ သင့်လျော်သော အစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုနိုင်သည်။
Gustave မှ Stuttgart - 2018.03.03 13:09
အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းယုံကြည်သည်၊ ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍၊ ကုမ္ပဏီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပြီး ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပြည့်မီကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အမြဲယုံကြည်ပါသည်။
မီလန်မှ Jessie - 2017.06.29 18:55
စိတ်ကြိုက် ဂဟေဆော်ခြင်း နှင့် သတ္တု အစိတ်အပိုင်းများ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ စိတ်ကြိုက်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံမှ ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် မီးတောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း (စွမ်းရည် 1.5 မီတာ *6မီတာ၊ အပျော့စားသံမဏိ 0.8-25 မီလီမီတာ၊ သံမဏိ 0.8-20 မီလီမီတာ၊ အလူမီနီယမ် 1-15 မီလီမီတာ)၊ ကွေးခြင်း (25 မီလီမီတာ မက်စ်)၊ ဂဟေဆော်ခြင်း (MIG၊ TIG၊ အစက်အပြောက် ဂဟေဆော်ခြင်း၊ etc.), Pu...
Custom Structure Steel Fabrication and Welding...
ကုန်ပစ္စည်းအမည် Custom Steel Fabrication Steel Structure Fabrication CNC Service Material Stainless steel/carbon steel/galvanized steel ဖောက်သည်၏ဒီဇိုင်းအတိုင်း ပုံမှန် Process CNC Laser Cutting > Metal Bending > Welding and Polishing > Surface Treatment > Assembled Components and packaging.မော်တော်ယာဥ်၊ ပရိဘောဂ၊ စက်၊ လျှပ်စစ်နှင့် အခြားသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ ထုပ်ပိုးခြင်း Standard seaworthy packing သို့မဟုတ် ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရ ကုန်သွယ်မှုစည်းမျဥ်းများ E...
စိတ်ကြိုက် Heavy Duty Steel Structure Welded Parts